Igumbi lomboniso lingahlulwa kubini okanye kathathu kuxhomekeke kwisikali somboniso.
Unokwenza indawo yakho ngokulungiselela iipaneli zemiboniso kaloliwe.Ingasetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo ezinje ngemiboniso kunye neentetho.
Kuba ayisosakhiwo esingenasandi, kukho izithintelo ngokuxhomekeke kumxholo wokusetyenziswa.Nceda ujonge xa ​​ucinga ukusebenzisa ezinye ngaphandle kwemiboniso, izifundo kunye neendibano zocweyo.Ayinakusetyenziswa ngevolumu ephezulu njengokudlala isixhobo somculo okanye ikaraoke. (Kukhawulelwe ubuncinci kwi-BGM.)
Akunakwenzeka ukuba uguqule ngokupheleleyo inkcazo yeenkomfa, izifundo, njl.
Indawo apho iphaneli yomboniso ehambayo ifakelweyo ayinakutshintshwa ngosuku.
Izandisi-zizwi ezinje ngeemakrofoni azinakusetyenziselwa umboniso.
Kuyenzeka ukuba uqhagamshele iholo elincinci kunye negumbi lomboniso (usetyenziso oluhlanganisiweyo). (Kuyimfuneko ukuba uboleke udidi olunye kwangolo suku lunye.)
Amandla / izixhobo
Iiphaneli zemiboniso ezingama-2.3 (W3.1 x H46m)
Imifanekiso engama-200 yokuxhoma
Amabala emiboniso ali-100 kunye nabanye
* Kwimeko yokwahlulahlula ukusetyenziswa, inani liya kutshintsha.
Idesika kunye nosihlalo: izihlalo ezingama-200
Iseti yezixhobo zomsindo (kubandakanya ii-microphone ezi-3 ezingenazingcingo) kunye nezinye
Abo basebenzisa igumbi lomboniso banokusebenzisa igumbi lokulungiselela ngaphandle kwentlawulo.
* Ukuba igumbi lomboniso lahlulwe, kuya kwabelwana ngalo namanye amaqela.
Malunga negumbi lokulungiselela igumbi
* Inokusetyenziselwa iintlanganiso kuphela.
* Nceda wenze ugcino kwangaphambili kuba kwabelwana ngalo neholo encinci.
Umatshini weqhwa, njl.
Kuba yabelwe kwigumbi, ayinakushiywa endaweni emva kokuba ingenisiwe okanye ikhutshiwe.
[Ipatheni yokubonisa 1] Kusetyenziswa onke amagumbi
Indawo: malunga ne-338 yeemitha zesikwere
Ukwandiswa kwephaneli yemiboniso: Malunga ne-138m
[Ipatheni yokubonisa 2] Yahlulwe kubini
Igumbi lezomboniso A
Indawo: malunga ne-166 yeemitha zesikwere
Ukwandiswa kwephaneli yemiboniso: Malunga ne-69m
Igumbi lomboniso B
Indawo: malunga ne-171 yeemitha zesikwere
[Umzekelo weMiboniso 3] Sebenzisa kumacandelo ama-XNUMX
Igumbi leMiboniso 1
Indawo: malunga ne-83 yeemitha zesikwere
Ukwandiswa kwephaneli yemiboniso: Malunga ne-40m
Igumbi leMiboniso 2
Malunga neemitha ezili-166 zesikwere
Ukwandiswa kwephaneli yemiboniso: Malunga ne-62m
Igumbi leMiboniso 3
Malunga neemitha ezili-88 zesikwere
[Ipatheni yentlanganiso] Izifundo / iindibano zocweyo (kusetyenziswa iintlanganiso)
Indawo: 362 square metres
Yonke imihla sebenzisa kuphela 28,000 / 28,000
Yahlulwe kabini (A / B)
Yahlulahlulwe yaba yi-XNUMX (XNUMX)
Yahlulwe yangam XNUMX (XNUMX)
Yonke imihla sebenzisa kuphela 33,600 / 33,600
Igumbi lokubonisa (intlanganiso) yezixhobo ezincedisayo / uluhlu lwemirhumo yokusebenzisa
Igumbi lokubonisa (umboniso) Uluhlu lwezixhobo / uluhlu lwemirhumo yokusebenzisa